[Ankapobeny ] 17 Novambra, 2008 07:51
Vehivavy gasy 4.000 te hanambady vazaha
Hividy fiaramanidina hfa indray hono ingahy Filoha fa tsy afapo @ ilay air force one keliny ao izy.Etsy an-daniny dia voalaza fa hiaka-bidy indray ny jiro sy rano. Ny solika moa dia tsy nisy fidinany mihitsy fa ariary be no mba fihenam-bidy. Ny baril anefa efa 60$ sisa. Misy fetsy be mihitsy ireo be vola ireo an.
Niletika kely ranews2dago teo ho eo izay satria variana @ fiainana an-davanandro. Eo ny fitaizana ny zaza eo ny asa somary maimaina tato ato izay. Fiainana daholo izany. Fa ny tena nahatonga saina ahy dia ny nijereko ny alimanaka fa hay efa madiva hivalona ity taona 2008 ity. Jereko ihany anefa izay tomban'ezaka toa ny eo ihany no eo. LoL ny tena no miantitra fa tsy hita izay tena zavatra niova.